कांग्रेस-माओवादी सम्बन्ध चिसिदै
१. नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले तीन महिनापहिले आपसी गठबन्धन गरी केपी ओलीको सरकारको पतन गरेका थिए। ओली सरकार पतन भएपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल साउन १९ गते प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित भएका थिए। ती दुर्इ पार्टीफे ९/९ महिना सरकारको नेतृत्व गर्ने गरी पहिलो पटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्री भएका हुन्। २. दाहाल नेतृत्वको सरकारले ९ महिनामा स्थानीय चुनाव… पुरा पढौ
१. सातौं राष्ट्रिय खेलकुट प्रतियोगिता शुक्रबार पूर्वाञ्चलमा सुरु भएको छ। प्रतियोगिता सुरु भएदेखि खेलाडी र खेलप्रेमीको ध्यान उतैतिर केन्द्रित भएको छ। फेरि यो प्रतियोगिता धेरै पटक र धेरै वर्षको प्रयासपछि आयोजना गरिएकाले पनि यसलाई उत्सुकतापूर्वक हेरिएको छ। विराटनगरको सहिद रंगशालामा सुरु भएको यो प्रतियोगिता वरपरका विभिन्न जिल्लामा पनि हुने भएको छ। केही प्रतियोगिता काठमाडौं र पोखरामा पनि हुँदै छन्। २.… पुरा पढौ
सन्त नेताको सम्झना
१. यस पटकको पुस ८ गतेले फेरि एक पटक सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई सम्झायो। सन्त नेताको ९२ औँ जन्म जयन्तीले विगतमा भन्दा बढी नै सम्झाएको अनुभूति भयो। देशमा मूल्य र मान्यताको राजनीतिको जति ह्रास हुँदै छ, उति उनको महत्व र स्मरण बढी हुँदै गएको छ। मूल्य र मान्यताको राजनीति गर्ने राजनीतिज्ञको महत्व र महिमा के-कति हुन्छ भन्ने कुरा सन्त नेता… पुरा पढौ
१. प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आजभोलिको व्यस्तता देख्दा र उनले गरेको भाषण सुन्दा देश समृद्धिको सिढी चढेको प्रष्ट भान हुन्छ। उनी यो साताकहिले पूर्व पुगे भने कहिले पश्चिमको दौडाहामा रहे। उनले विभागीय मन्त्री र सचिवलाई पनि पछि पारेर विभिन्न परियोजनाको निरीक्षण र प्रगति विवरण आफैले सुन्ने र बुझ्ने गरेका छन्। २. हिजो प्रधानमन्त्रीका् सपथ ग्रहण गरेपछि उनले सानोतिनो रिबन काट्ने काममा… पुरा पढौ
छाउपडी : एक अभिशाप
१. अछाम जिल्लाकी १५ वर्षीया रोशनी तिरुवाको छाउपडी प्रथाका कारण निधन भएको समाचारले धेरैलाई संवेदनशील बनाएको छ। केही साताअघि त्यही जिल्लाकी डम्बरा उपाध्यायको पनि छाउपडीकै कारण निधन भएको थियो। अछाम र अछामवरपरका जिल्लामा छाउपडी प्रथा व्याप्त छ। यसलाई जति रोक्न खोजे पनि रोक्न सकिएको छैन। २. ती जिल्लामा घरनजिकै छाउपडी गोठ बनाइएका हुन्छन्। महिला महिनावारी भएका बेला छुन हुन्न भनेर… पुरा पढौ
मुस्ताङ्गी राजाको निधन
१. नेपालमा राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रप्रेम, देशभक्ति आदिको चर्चा भइरहेका बेला एक जना सच्चा देशप्रेमीको निधन भएको छ। त्यसरी निधन भएका विशिष्ट व्यक्ति हुन् : मुस्ताङ्गी राजा जिग्मे परबल विष्ट। उनी मुस्ताङको संवेदनशील बेलामा नेपालको हकहितका लागि प्रतिवद्ध रहे र सधै सरकारलाई साथ र सहयोग गदै रहे। उनको शुक्रबार काठमाण्डौमा ८६ वर्षको उमेरमा निधन भयो। उनी लामो समयदेखि उच्च रक्तचाप… पुरा पढौ
सहयोग रकम गुम्न नदेऊ
१. चीन सरकारले नेपालका भूकम्प पीडित परिवारलाई पुनर्निर्माणका लागि दिने भनिएको १५ अर्ब रुपैयाँ गुम्ने समाचारले धेरैलाई स्तब्ध पारेको छ। चीनले पुनर्निर्माणका लागि त्यसै बेला ४५ अर्ब रुपैयाँ दिने प्रतिवद्धता जनाएमध्येको यो १५ अर्ब पहिलो किस्ता हो। यति ठूलो रकम त्यसमा पनि भूकम्प पीडितको पुनर्निर्माणका लागि दिने भनिएको रकम के-कसरी गुम्ने भएको हो, त्यसमा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ। २.… पुरा पढौ
१. नेपाल-भारतको सम्बन्धको सम्बन्धमा धेरैले धेरै लेखेका छन्, बोलेका छन्। कसैले यी दूर्इ देशको सम्बन्धलाई विशेष सम्बन्ध भनेका छन् भने कतिपयले उत्कृष्ट सम्बन्ध पनि भनेका छन्। कहिलेकाहीँ यिनीहरूको सम्बन्धमा उतारचढाव आएका छन्। नाकाबन्दीको घटनासमेत भएका छन्। नेपालले बेलामौकामा नाकाबन्दीको अमानवीय मार सहनु पनि परेको छ। २. त्यसरी विकसित भएको दूर्इ देशको सम्बन्धलाई अद्यावधिक गर्नका लागि दुवै देशले प्रबुद्ध समूह गठन… पुरा पढौ
स्वाभिमान बचाउने बेला
१. सरकारले संसदमा पेश गरेको संविधान संशोधन प्रस्ताव भारतको इशारामा ल्याइएको भनी प्रचारप्रसार भइरहेका बेला भारतीय राजदूत रञ्जित रेले त्यो प्रस्ताव पारित गराउन दौडधूप गरिरहेको कुराबाहिर आएको छ। राजदूत रेले मधेसी मोर्चाका नेताहरूलाई दूतावासमा पटक-पटक बोलाएर सम्झाउने गरेका छन्। त्यसैको परिणाम मधेसवादी नेताहरू उक्त प्रस्तावप्रति केही लचिलो भएको संकेत देखिएको छ। २. मधेसवादी नेताहरू त्यसरी लचिलो देखिन थालेपछि सत्तामा बसेका… पुरा पढौ
अधिकार दिवसको सार्थकता
१. हामीले १६ दिने महिला हिंसा विरुद्धको अभियान र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवस विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाएका छौँ। मानिसको जीवनमा यी दुवै दिवस अत्यन्त महत्वपूर्ण छन्। संयोगले यी दुवै दिवसका श्रंृखला एकापसमा जोडिएका छन्। त्यस दृष्टिले यी दिवसको महत्व अरु बढ्न गएको छ। २. माओवादी जनयुद्धका बेला मानवअधिकारको स्थिति अत्यन्त खस्केको थियो। माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि अहिलेको स्थितिमा केही सुधार… पुरा पढौ